Ezona ndlela zintle zokuziphatha
Ukuphononongwa kweenoveli zemveli
Indlu yeFashoni, nguJulia Kröhn
Njengenxalenye yokukhuthazwa kwale noveli, ibango lokuba ukwenzakala kwakhe kuthimbe omnye wababhali abakhokelayo kwimo yokuziphatha yenkulungwane yeshumi elinethoba ekhonza incasa yomfundi we-melancholic kunye nezizathu ezithandekayo ezinjengobufazi. Ngaba kunokwenzeka ukuba u-Anne Jacobs awuthande lo msebenzi we ...
Abavukeli Zama kwakhona, nguMauro Javier Cárdenas
Inoveli inokusetyenziswa ngokugqibeleleyo ukuze wazi isicwangciso esithile okanye ilizwe liphela. Isindululo esibalisayo ngenjongo yokusondela kwindalo esingqongileyo, sikunika umxholo wokuba ngubani okhe wahlala kuloo ndawo. Ingavakala njengeyinyani, kodwa kuninzi ukubaluleka kulo mbono. Ekugqibeleni, …
Uninzi, nguTomás Arranz
Incwadi eyonwabisa kwaye ihlakule kufuneka ihlale inikwa ingqalelo ekhethekileyo. Kwimeko yale noveli Ininzi. Ngesikhephe kungekudala ndiza kuza notoliko oluninzi lwesihloko senoveli (esoloko sizithoba emva kofundo olonwabisayo). Kuba isihloko sinentsingiselo ebonakalayo eza kuthi kungekudala ...
Iofisi yamachibi kunye negadi, nguDidier Decoin
I-odyssey yomfazi ngenkulungwane ye-XNUMX eJapan. Isishwankathelo esingqongqo sale noveli sishwankathelwe kweli binzana lilula. Eminye iza mva…. UDidier Decoin uthathe ukubhalwa kwale noveli ngokungathandabuzekiyo (njengoko kufanelekile, kunjalo) Ngaphezulu kweminyaka elishumi ...
Usapho olungafezekanga, nguPepa Roma
Le noveli ithiwe thaca ngokusemthethweni kuthi njengenoveli yabasetyhini. Kodwa ngokuqinisekileyo andivumelani neleyibhile. Ukuba ithathwa ngaleya ndlela kuba iyathetha ngaloo matriarchy enokwenzeka eyayigcina iimfihlo zalo naluphi na usapho kwaye ifihle iintlungu zeengcango zangaphandle, ayinangqondo. Akukho nto …
Ingxelo yokufa okuxelwe kwangaphambili, nguGabriel García Márquez
Ukungabi nantlonelo, umthetho ongabhalwanga, amanyathelo okuzola, ukubala, kunye nentlungu yokulahlekelwa ngumntu omthandayo. Wonke umntu uyazi kodwa akukho mntu ugxekayo. Kuphela ngomlomo, kwabo bafuna ukumamela, inyaniso iyaxelwa amaxesha ngamaxesha. Wonke umntu wayesazi ukuba uSantiago Nasar uzokufa, ngaphandle kukaSantiago ngokwakhe, ongasaziyo isono esibi awasenzayo emehlweni abanye.
Ungayithenga ngoku ingxelo ngeXesha loKufa okuxelwe kwangaphambili, inoveli emfutshane eyahlukileyo kaGabriel García Márquez, apha:
Ngaphandle, nguJesús Carrasco
Kwafika ezandleni zam njengesipho esivela kumhlobo olungileyo. Abahlobo abalungileyo soze basilele kwiingcebiso zoncwadi, nokuba akukho kumgca wakho wesiqhelo ... Umntwana ubalekela into, asazi ncam ukuba yintoni. Ngaphandle koloyiko lokubalekela ndawo, uyazi ukuba ...